Imtixaankii Fasalada 12aad Ee Heer Qaran Oo Ka Bilowday Deegaanka Iyo Masuuliyiinta Xukuumada DDSI Ugu Sarayso Oo Booqday Goobaha Imtixaanaadku Kasocdo. - Cakaara News
Imtixaankii Fasalada 12aad Ee Heer Qaran Oo Ka Bilowday Deegaanka Iyo Masuuliyiinta Xukuumada DDSI Ugu Sarayso Oo Booqday Goobaha Imtixaanaadku Kasocdo.
Jigjiga(CN) waxaa, guud ahaanba dalkeena Itoobiya maanta ka bilowday imtixaankii heer qaran ee fasalada 12aad, iyada oo uu imtixaankii safalada 10aadkana maalintii shalay la soo gabagabeeyay.
Haddaba waxaa intii uu socday imtixaanka fasalka 10aad booqasho ku soo maray dugsiyada uu ka bilowday imtixaanka ee maamulka magaalada jijiga, masuuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ka mid yahay. madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan, waxayna u kuur galeen habka iyo nidaamka ay u socdaan imtixaanaadku.
Waxaana, warbaahinta deegaanka uga warbixiyay nidaamka uu u socdo itmitaanku iyo tirada ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan, wuxuuna, sheegay guud ahaanba deegaanka iyo dalkaba sidii loogu tala galay uga bilowdeen imtixaanka fasalada 10aad iyo 12 aad.
Wuxuuna, tilmaamay madaxwayne ku xigeenku in ay tirada dugsiyada imtixaanka fasalada 10aad ka uu ka soday tahay 120 dugsi, tirada ardayda u fadhiisatayna tahay 15,902. sidaa kale tirada dugsiyada uu ka bilowday imtixaanka 12aad ku tahay 69 dugsi, taasi oo ay u fadhiisteen arday dhan 8,942. Halka ay tirada dugsiyada uu ka bilaabmayo itmixaanka 8aadku tahay 393, taasi oo ay u fadhiisanayaan arday dhan 26,440 arday. Taasi oo ay wadarta guud ee u fadhiisatay imtixaanaadka fasalada 10aadka, 12 aadka iyo 8aadku tahay 51,284.
Waxaa kale oo xusid mudan in intii ay uu socday imtixaanka fasalada 10aad ku ay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI iyo hogaanka ku xigeenka nabadgalyada maamulka iyo cadaalada DDSI mudane shurgi badal ay booqdeen dugsiga sare ee ku yaala xarunta dhexe ee dhaqan toosinta DDSI, halkaasi oo ay ku booqdeen maxaasiibta u fadhiisatay imtixaanka fasalka 10aad oo xiligaasi ku guda jiray ka shaqaynta imtixaanka.
Xarunta dhexe ee dhaqan toosinta DDSI waxaa ku yaala dugsi bixiya waxbarashada fasalada 1aad ilaa 10aad waxaa kale oo xusid mudan in ay xaruntani bixiso dhamaan xirfadaha aqooneed ee kala duwan taasi oo ay maxaabiisu marka ay ka soo baxaan xarunta dhexe noqda kuwa aqoon leh oo xirfadii ay ku soo barteen xarunta ku shaqaysan kara. Waxaa kale oo ay masuuliyiintaasi booqdeen goobahaasi lagu baro xirfadaha aqooneed, maxaabiista dhaqan toosinta ugu jirta xarunta dhexe.